Banyere Anyị - Zhe Jiang XinHong Electric Co., Ltd
Zhe Jiang XinHong Electric Co., Ltd.is dị na Xiangyang ulo oru mpaghara, Liushi, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China. Liushi bụ isi obodo nke ala-na-voltaji ngwa inChina. Xinhong na-achọkwa na Shanghai Kangji Ọdụdọ Equipment Co ,. Ltd na Shanghai Dikai Electric ngwa oru Co ,. Ltd iji ọkachamara maka nnyocha, mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ. Irubere a ọnụ ọgụgụ nke ọma-mara ụlọ na ndị mba ọzọ buru ibu ma na-ajụ-sized ụlọ ọrụ maka OEM .. Ma Shanghai Kangji Ọdụdọ Equipment Co ,. Ltd na Shanghai Dikai Electric ngwa oru Co., Ltd na-dị na Songjiang, Shanghai n'ógbè.
Ngwaahịa: nọọrọ onwe ha nnyocha na mmepe na AC contactors (AC_and_DC_du-al-ojiji. Low okpomọkụ ịrị elu na ala ike oriri. Sụgharịa ka ụkpụrụ nke IEC60947.2). pụrụ iche mgbochi ọdịda (Feng XING) contactor maka elevator.Special contactor maka mmiri boiler.ac contactor.dc contactor.auxiliary kọntaktị ngọngọ, oge na-egbu oge block.star Delta Starter, nchọ Starter, kwes bufee agba anọ na na.
Enterprise ike: anyị nwere laabu, ahịa ngalaba, nnyocha na mmepe ngalaba, n'ichepụta ngalaba, àgwà ngalaba, management ngalaba na ọkachamara ọkachamara otu, anyị na-n'ụzọ zuru ezu mejuputa EIP management. Anyị ụlọ ọrụ a n'ụzọ zuru ezu gabiga akwụkwọ nke àgwà usoro IS09001. Anyị na ngwaahịa na-gbaara site CCC na OA, anyị na e nyochara na mepụtara CNC5 usoro AC contactor na CNC6-T pụrụ iche mgbochi ọdịda (Fengxing) contactor maka mbuli. Products izute mba ụkpụrụ ume arụmọrụ na imewe larịị e ruru eduga larịị n'ụlọ na mba ọzọ. Anyị na-enweta elu uche nke ọtụtụ ndị ahịa na anyị na ngwaahịa na-exported toKorea, Brazil, India, Italy, Russia, Taiwanand mba ndị ọzọ na mpaghara.
Enterprise spirit: mmụta, ọhụrụ, iguzosi ike n'ezi, nraranye.
Quality iwu: peopel oriented.qulity based.creativity na accuracy.keep na-aga n'ihu
Business nkà ihe ọmụma: ka ndị ahịa ina ka ndị na-eduga na-akpata. nnyocha na ịzụlite-ment mmepụta nke elu àgwà ala na-eri ngwaahịa
Enterprise ọhụụ:-kacha mma contactor emeputa.